Shisheeyihii shalay Soo dhisay Shariif oo Maanta Shaarka Macsalaamaynta Ugaliyay.(Maqaal) | News From Somalia
Shisheeyihii shalay Soo dhisay Shariif oo Maanta Shaarka Macsalaamaynta Ugaliyay.(Maqaal)
Posted on September 26, 2012 by Voice Of Somalia Standard
Inta waxgaradka ah ee Aqoonta Xeeldheer uleh Gaalada iyo Danaha Reer Galbeedka Soomaaliya kuwajahan Daaha kama saarneen in Madaxweyne shariif Mar un Daaqada laga saari doono isagoo waliba aanan Jecleyn in Laceyriyo.
Inbadan oo ahaa Madaxweynayaal Maqaar saar ahaa Halkey kadanbeeyeen? iyagoo jecel in Gaalada iyo waxa liyiraahdo Beesha Caalamka lasii shaqeeyaan ayaa Daaqada laga saaray kadib markii lagu gaaray danihii laga lahaa.
Shariif sheekh waa uu ugaa Dhagarta Gaalada oo dhowr jeer ayaa fagaarayaasha Dadku ay kukulmaan kasheegay in Gaaladu ay yihiin kuwa cadow u ah Muslimiinta islamarkaana aysan raali kanoqonayn ilaa ay iyaga lamid noqdaan oo Diintooda Baadilka kuqancaan.
Shariif isagoo tusaalo uhaystay sida loogu adeegtay Cabdulahi Yuusuf ,isalamarkaana aayihiisa Xero qaxooxti wax lagu tilmaami karo yaman kugalay ayuu kala wareegay Kursiga.
Shariif Maanta waxa uu hayaa wax uu filanayay waxa kuduwan,sheekhii shalay waxaan aaminsanahay inuu iska dhaadhiciyay inta Mujaahidiin Soomaaliya ay kadagaalamayaan in Looga Maarmi Doonin Dagaalka Maraykanka iyo Xulufadiisa ay kula Jiraan Mujaahidiinta Soomaaliya.
Shariif Dhowr jeer oo laba iyo shan kor udhaaftay ayuu sheegay in Alqaacida uu garanayo sida loola dagaalamo isagana uu hayo Xalka Lagu Cirib Tirayo Mujaahidiinta Soomaaliya.
Sadax sano waa uu kumeel maray Beentaasi uu kadhaadhiciyay Reer Galbeedka laakin ugu danbayntii waa laga daba yimid oo rag Cilmaaniyiin ah Gaaladuna isaga ay kajecelyihiin ayaa sheegay in iyaga ay kaxeynkaraan Gaariga uu laraftay odayga shariif.
Shariif oo siweyn udareemay inay kusoo wajahanyihiin Dabeyl kaga Timid Qurba Joog ayaa kahor inta aysan Doorashadu dhicin waxa uu kuhadlay waxyaabo kaduwan wixii dhawaanahaan uu kuqancinayay Gaalada Caalamka.
Mar waxaa laga hayaa oo uu yiri markale hadii ladoorto in Diinta uu guud ahaan kasaari doono Maamulkiisa Dalkana uu kahirgalinayo Masaalixda Gaalada.
Talyaaniga waxa uu ubalanqaaday in Kaniisadooda ay kadhisanayaan Muqdisho,Beerahooda Soomaaliyana ay sinabad galyo ah utacbanayaan.
Shariif waxa uu yiri waligayga maxkamadaha waxaan ladaba socday fashil iyo Guuldaro.
Maxkamadaha ayaa Dalka Burburiyay aniga Hogaan kama noqon iyo erayo kale oo lid isku ah ayuu kuhadaaqay sida qof waalan oo kale.
Shariif wax kasta waa uu sheegay laakin cidna kama qaadan oo maanta ayaa meesha laga saaray.
shariif maanta ayaa loo qabtay Munaasabadii ugu danbaysay ee lagu sagootinayay meeshana looga saaray taladiisa Madaxtooyada kashaqeyn jirtay.
Shariif waxa uu kucalaacalay in Bishii lasiiyo 25 kun oo doolar si uu ugu maareeyo noloshiisa iyo xaasaskiisa.
Sida loo liiday shariif waxa aad kadareemaysaa in Munaasabada Maanta lagu sagootiyay uu soo qabanqaabiyay Axmed Daaci Gudoomiyaha Degmada wadajir oo ay isku haybyihiin
kama aysan dhex Muuqan Mahiiga iyo ragii kale ee shariif kusoo shaqaystay,layaab malahan ee qofka kasta oo u adeega Gaalada sidaasi ayaa udanbaysa.
10 bishan Septermer oo uu guuleestay Xasan Sheekh Maxamuud Shariif Cago adag kuma taagneen laakin maanta ayaa laceyriya.
Xasan Sheekh Maxamuud Shariif xitaa waa uu kala haray dahab uu labaxsan lahaa.
Aqristow iga Qor Xasana Hadduu alaah Naf igu gaarsiiyo isna Meeshaasi ayaa udanbayn doonto.
Shariifow Halkee Aadi? miyaad towbad keeni mise gaalada caalamka ayaad kacodsanaysaa in Laguu raadiyo meel aad kaga dhuumato Mujaahidiinta Soomaaliya oo iminka wali katalinaya Gobalada Koonfureed ee Soomaaliya Dadkana kudhaqaya Shareecada islaamka.
WD.Wariye Saalax Gurey
This entry was posted in Ashahaado la dirir!, Banaadir Post, Maleeshiyo Beeleed, Shariif Sheekh Axmed, Somali Media, Somalia and tagged Ashahaado la dirir, Shariif Sheekh Ahmed. Bookmark the permalink.
Hooyo Maryan “Canugeyga iyo Gacanteyda waxaan ku Waayey Markii uu si Bareer ah ii Toogtay Askeri Ugaandheys ah”.
Shariif Sheekh Axmad oo ay magangalyo siyaasadeed u diideen kuwa loogu yeero beesha caalamka iyo ALAA SHEEKH oo tahriibiya